Ragga Kama Sabraan Haweenka Tilmaamahaan Laga Helo | Gaaloos.com
Home » galmada » Ragga Kama Sabraan Haweenka Tilmaamahaan Laga Helo
Ragga Kama Sabraan Haweenka Tilmaamahaan Laga Helo
Ninka wuxuu jecelyahay in ay noqoto haweeneyda nolosha kula shirkoobeysa mid bari ah oo fikrado lama filaan ah keenta halka ay ka lahaan laheyd qurux badan.
Haweeneyda bixinta leh iyodaqaeynta xoolaha qalan.
Haweeneyda xoogan hadanadaciifsan.
Ninka waxa uu jecel yahay inhaweeneydu ay ogaato xilliga ay awood yeelaneyso iyo xilliga ay daciif noqoneyso.
Waxauuna jecel yahay ninkasidoo kale in haweeneyda nolosha uu la wadaagayo ay gacanta u soo taagto markuu doonana uu u jaro laakiin ninku ma jecla in xaaskiisa ay xilli waliba noqoto mid awood leh isagana uu dareemayo awoodeeda Sidoo kalena ma jecla ninka dafiictinimada xaaskiisa mar waliba inta uu xaalkeeda meeshii ugu xumaa ka gaaro.
Title: Ragga Kama Sabraan Haweenka Tilmaamahaan Laga Helo